Barack Obama akakurudzira kuverenga mabhuku mana kumwanasikana wake Malia | Zvazvino Zvinyorwa
Barack Obama akakurudzira kuverenga mabhuku mana kumwanasikana wake Malia
Malia, mumwe wevanasikana ve Barack Obama, ndichaenda kukoreji nekukurumidza. Ndicho chikonzero ichi kuti baba vake, mutungamiri weUnited States kusvika zvino, vanga vachida kukurudzira kumwanasikana wavo kuverenga kwemabhuku mana, maviri acho ari echikadzi.
Imwe yei zvinokuvaraidza izvo aimbove Mutungamiriri wenyika VaObama vakanyanya kuzvirumbidza panguva yake muhofisi, anga ari Mabhuku. Mubvunzurudzo, akataura kuti uyu ndiye aive azviita. kuva munhu ari nani, uye iye anga amuperekedza mune rake rakaoma (dzimwe nguva) makore eWhite House. Akatosvika pakutaura kuti nekuda kwemabhuku, aive apona makore iwayo ari muhofisi.
Asi, Ndeapi anga ari mazano ekunyora kumwanasikana wako Malia? Tevere, isu tine pfupiso pfupi yeumwe neumwe wavo.
1 Doris Kudzidza's "Iyo Goridhe Notibhuku"
2 "Vakashama uye Vakafa" naNorman Maler
3 "Mukadzi Murwi" naMaxine Hong Kingston
4 "Makore Mazana Ekusurukirwa" naGabriel García Márquez
Doris Kudzidza's "Iyo Goridhe Notibhuku"
Iri bhuku nemunyori Doris Lessing, rinorondedzera dambudziko rakadzika rehupenyu hwaAna Wulf, munyori akarambana uye murwi wechiCommunist. Iyo chete nzira nyowani yekutarisa chokwadi inogona kuichengeta, uye kusvika pano Anna anotanga kunyora mabhuku mazhinji, rimwe nerimwe rakatsaurirwa kuchikamu chehupenyu hwake. Kukundikana kuvaita kuti vape mufananidzo uzere wehupenyu hwake, anotanga kunyora bhuku regoridhe, maanoshuvira kutora ese magumo enhau yake.
"Vakashama uye Vakafa" naNorman Maler
"Vakashama uye Vakafa" Yakaonekwa muUnited States muna Chivabvu 1948, makore matatu chaiwo mushure mezuva rekukunda kwemaAllies muHondo Yenyika II. Norman Mailer, munyori waro, aive nemakore makumi maviri nematanhatu, uye apedza kudzidza kubva kuHarvard nekunyora muchiuto, anga ari mumwe wemauto akapamba Japan mushure mekukundwa. Vatsoropodzi vakadana basa rake kuti "rakakura kwazvo bhuku rehondo rakanyorwa muzana rino ramakore," iro nekufamba kwenguva rave bhuku rengano. Mailer akafananidzwa naHemingway naTolstoy uye akabva angotaridzwa pakati pemakuru emabhuku eAmerica.
Iri bhuku rinotaura nezve zvimwe zvezviitiko zvakararama naMailer pachake muHondo Yenyika II.
"Mukadzi Murwi" naMaxine Hong Kingston
Iyi nganonyorwa ndeye autobiographical. Yakaburitswa muchinyorwa umo iro basa rezvinyorwa revakadzi rakabvunzwa zvine simba. Parizvino, iyi nyaya ndeimwe yemanointessential echikadzi zvinyorwa. Sekuzvinzwisisa kwatinoita, ndiro rinonyanya kudzidziswa uye kushandiswa razvino bhuku rekoreji muUS.
"Makore Mazana Ekusurukirwa" naGabriel García Márquez
Iri bhuku rakakurumbira uye rinozivikanwa naGabriel García Márquez rakasimudzirwawo naObama. Tinofanira kurangarira kuti nderimwe remabhuku anotengeswa zvakanyanya munhoroondo uye sezvo munhu wese achinyatsoziva (panogona kuve nemunhu anogara achiverenga uyo asati averenge bhuku iri?) Inotaurira nyaya yemhuri yeBuendía mukati zvizvarwa zvinomwe mutaundi rekunyepedzera reMacondo.
Iwe unofungei nezvemabhuku akakurudzirwa neaimbova mutungamiri wenyika yeUnited States kumwanasikana wake? Nezve kuravira kwangu, kubudirira kwazvo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Barack Obama akakurudzira kuverenga mabhuku mana kumwanasikana wake Malia
Donald Trump anoda mabhuku asi haaverenge zvakanyanya
Edgar Allan Poe. Zuva idzva rekuzvarwa reBoston genius. Makorokoto.